isifo Peyronie sika - isifo lapho ugobile umthondo ezingabantu. Kulokhu, it unesifo hhayi kuphela isimo somzimba ubulili namandla, kodwa isimo sakhe sengqondo. Amadoda anjalo ebucayi kakhulu kunoma isiphi isimo, kwenzekani kubo kukhona.
Lesi sifo kubonakala ekwakhekeni ezibuhlungu micro phezu umthondo phakathi ocansini. Nakuba umonakalo onjalo imperceptible sibonakale emehlweni abantu, basuke ephelezelwa lacerations. Microtrauma some ngokushesha ngokwanele, bese noluncane uhlala. Amadoda angaphansi kwalesi sifo, izilonda ukuphulukisa ngesikhathi esifushane, kanti emkhakheni kwezicubu ukudabuka uhlala isibazi, eyagcina iqala lukhuni.
Ukunqotshwa kwe-umthondo kwenzeka kuphela ohlangothini olulodwa. Futhi kolunye uhlangothi ukwakhiwa elandelayo wenduku sisalokhu, kanti eyesibili kokuba kophawu, ayikwazi sisalokhu. Ngemva kokuya ocansini wenduku iba lwalugobile, elibangela indoda ukuba uzwe ubuhlungu obukhulu ngisho ubuhlungu. Kulokhu, kungase kuvele izinkinga ezinkulu Erectile umsebenzi.
isifo Peyronie sika ngokuvamile livela amadoda ngemva kweminyaka engu-40. Isilinganiso sobudala abafana ngaphansi isifo enjalo engu-53, kodwa isifo kungenzeka cishe noma nini. Iningi amacala ezimela abamhlophe, ngezinye izikhathi atholakala iziguli abameleli labantu Negroid, futhi kakhulu kuyaqabukela - abakhileyo emazweni asempumalanga.
Ngaleso sikhathi samanje, isifo Peyronie basakaza emhlabeni wonke kuyinto 0.3-1%. A ingxenye enkulu yabantu amadoda musa kudokotela ngendlela esifike ngesikhathi, futhi walala luhlolo yabo unomphela. Ukubukeka wokuqala ubuhlungu ngesikhathi ukwakhiwa kufanele ngokushesha kudokotela.
Njengamanje, khudlwana inani lamadoda ukuthi nginesifo isifo Peyronie sika. Izimbangela lesi sifo Namanje hhayi zaziwa kahle kakhulu. Kodwa kukhona izinto ezithile ezibanga ukuqala lesi sifo.
Microtrauma ezithweni zangasese ezingabantu.
Izifo: sikashukela, contracture Dyupyuiterna isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Iziguli bathole isifo Peyronie sika, izimpawu isifo cishe ngokushesha.
ubuhlungu abahlakaniphile basheshe ngesikhathi ukwakhiwa.
Ukwehla rigidity wenduku.
uphawu olubonakalayo kwi umthondo.
Ngenxa ukuvuvukala penile ku albuginea Tunica avele seal ukuthi deform emzimbeni. Lokhu kungase i- pooling eyeqile isimiso lwemithambo ku phallus. isifo Chordee Peyronie sika 90 0 bengase bazikhandlele. I umthondo kungaba ngezindlela ezihlukahlukene: the "bottleneck", "i-hourglass". Noma yimuphi ukuhlanekezela kubangela ukungakhululeki umuntu futhi kuholela ukungasebenzi Erectile.
isifo Peyronie sika singenzeka kokubili amafomu oyingozi futhi ezingalapheki. Isikhathi esining impela ifomu abukhali ezingamahlalakhona samaqanda. Ifomu okukhulu lesi sifo esigabeni asebenzayo. isikhathi salo ngemva kwezinyanga eziyisithupha kuya onyakeni nengxenye. Uma ubona koqweqwe umthondo ingabe usekhona bebodwa, isiguli imithi kadokotela. Ngenxa yokungenela kwamanye yezokwelapha ngesikhathi esifanele amathuba asathuthuka lesi sifo ancipha kakhulu. Esikhathini sokungabi nhlobo ukuphathwa kungenzeka ukulahlekelwa ukwakhiwa kanye nezinkinga kakhulu ngokomqondo isiguli.
Pretty elula ukuhlola isifo Peyronie sika. Photo ikhombisa ezinye zezinkinga ezihlupha amadoda.
Ekupheleni sobuhlobo bobulili wenduku ishintsha indlela yayo, zikhona emizweni ezibuhlungu. Uma une lezi zimpawu kumele ngokushesha afune usizo lwezokwelapha. Isizathu ukuvakashela udokotela futhi kuyoba ukubonakala ku lwezimpawu umthondo, kanye ezibukwayo ifomu ukungakhuli umzimba ngesikhathi ukwakhiwa.
Ukuthola zingcwecwe e 78-100% we wathi esigabeni sokuqala lesi sifo. Lapho curvatures wenduku e 52-100% of amacala banalesi sifo, futhi ukubonakala bavukelwe ubuhlungu - 70% amadoda ukuthola isifo Peyronie sika. Ukwelashwa kuzojovwa kuncike izinkinga itholiwe.
I diameters lwezimpawu zingase zihluke. Isilinganiso usayizi qwembe ka 1.5-2 cm. Zingahloselwa isebenze ezindaweni ezahlukene. Ngokusho indawo yabo ukuhlukanisa amaphiko, ugobile ventral kanye lateral.
Kukhona izindlela zokwelapha nokusebenza yokutakula iziguli kwathiwa unesifo isifo Peyronie sika. Ukwelashwa, noma kunalokho Ukukhetha indlela njalo uthola inkinga kakhulu noma yimuphi udokotela. Namuhla, kunezindlela olandelanayo ukwelapha isifo nokuhlinzwa.
Njengoba zindlela nokwelashwa kwezifo kungakephuzi Peyronie sika secrete imithi ehlukahlukene. Lo mshini wezenzo seningi izidakamizwa kusekelwe yokubola collagen ethandele akha uphawu. Ngakho, uqwembe iba ngaphansi obukhulu, futhi kugcine nokwanda kwalo.
Kubalulekile kakhulu ukusebenzisa izindlela ekwelapheni Physiotherapy. Kulokhu, ultrasound, indlela ye-laser kazibuthe, phonophoresis (ukwabelana izidakamizwa kanye ultrasound). amasu Physiotherapy zisekelwe okwandisa ijubane ukusabela ezenzeka emzimbeni, futhi massage isixwayisi.
izindlela okulondoloza sokubuyisela impilo owesilisa ngempumelelo ngokwanele, futhi inani leziguli abalulama imayelana 10-25%. Futhi amafomu ezinzima lesi sifo futhi ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi Dynamics omuhle ka engashiyi yokwelapha kubhekwe ukuhlinzwa.
Abesilisa ukuthi nginesifo ukwelashwa isifo izidakamizwa Peyronie sika inikezwa e esigabeni sokuqala lesi sifo, ekuqaleni ukuvuvukala. Kuyinto okwamanje waphawula izimpawu zokuqala zesifo nobuhlungu amadoda zigcinwa. Izidakamizwa ukuyeka umsebenzi ukuvuvukala kubuyise albuginea Tunica zisesimweni egculisayo. Nge Ukungenela ngesikhathi esifanele lesi sifo kungenziwa kuphazamisekile futhi belaphe ngokuphelele indoda. Lapho usebenzisa i-umjovo kanye njalo 2 amaviki ugobile umthondo iba ngaphansi kuka-60% amacala futhi 71% zokuphila ngokocansi zabesilisa iba ngcono.
Kungadingeka ukubuyisela ifomu ilungu ukuhlinzwa. ukuphazamiseka esinjalo singazisiza futhi ukuba amadoda nge Erectile Dysfunction, okuyiwona ukwelashwa imithi, Physiotherapy namasu cleaner yayingasizi.
Ukubuyisela ilungu Umumo engela ugobile esingaphansi 45 0 kungukuthi babelwe ukusebenza.
Le ndlela has a yi omuhle cishe 95% amacala. Okokuqala, udokotela ucubungula Erectile umsebenzi. Ngenxa yale njongo, izidakamizwa vasoactive. Inzuzo enkulu ukusebenza itholakala alula, kodwa kusimo ukunciphisa ubude umthondo.
Ukufakelwa phezu albuginea Tunica
Grafts bavunyelwa ukuba alulame ukuma umthondo ngaphandle ukunciphisa ubude balo ngaphandle Erectile Dysfunction. Uma ngesikhathi lwezimpawu ukusebenza mkhuba phezu umthondo, kuba ingozi eliphezulu kakhulu ngenxa yezinkinga. Ngo-18% amacala ukuhlanekezela iphinde ibuya, futhi eminyakeni engu-20% eziguli livela Erectile Dysfunction. Ukuze wehlise izingozi ezingase zibe khona, kudingeka usike uphawu. Grafts kungenzeka umthambo ongama noma pericardium sezinkomo. Indlela siyasebenza ngempela, cishe 95% eziguli alulame.
izimila Penile wokufakelwa
Lapho okuvela ngesikhathi esisodwa isifo Peyronie anabo Erectile Dysfunction, okuyizinto emithini, impatho cleaner futhi umjovo ethula, ukusetshenziswa penile sokwenziwa yenzeka. Indlela esebenzisa indinganiso, akudingekile ukuba enze sebeziqhumbuza eziphumulele bese usetha Ukufakelwa.
Folk izindlela ukubuyisela impilo
Kukhona izindlela ababezibheka ukwelapha izifo ezifana nesifo Peyronie sika - ukwelashwa amakhambi abantu.
Primrose, incwadi, sage, burdock izimpande, oregano kanye toadflax exutshwe 100 amagremu ngamunye nechobozekile. Khona-ke, endaweni thermos 2 tbsp. l. ingxube uthele 2 izinkomishi amanzi abilayo futhi zaparivat ubusuku. Ekuseni ukumnika okuholela is elicwengekileyo. Ingxube ziphele izikhathi 4 nsuku zonke nge 100 ml imizuzu 30 ngaphambi kokudla. I ukumnika kufanele uzilungiselele nsuku zonke.
Enkomishini yamanzi abilayo kuthululwe 15-20 amagremu izithelo ezivuthiwe horse usika izingcezu azidingayo ngokucophelela, ngaphambili ochotshoziwe, zonke alethwe abilayo futhi ubilise imizuzu engu-15. Ngemva isixazululo selupholile, kubalulekile ukuhlunga ke. Kufanele uphuze sips 1/3 cup encane phambi ngasinye lapho sidla, kodwa akukho inkomishi ezingaphezu kwesisodwa ngosuku. Ukuze uthuthukise ukunambitheka, ungakwazi ukwengeza isiraphu berry ngqo ukumnika.
Kanyekanye ukwelashwa kusebenza Kunconywa ukuthatha zokugeza kwezokwelapha. Ngenxa yale njongo, 3 amaphakethe esikweyoku owathela ibhakede lamanzi abilayo. Ukumnika ikhefu imizuzu 30 ke nzima futhi uthele amanzi okugeza lelungiselelwe. Izinqubo ezinjalo kungenziwa ngosuku. Isikhathi okugeza ngamunye akufanele budlule amaminithi 10-15. Emva amanzi okugeza, kutuswa ukuba alale ngokushesha.
amadoda abaningi ebhekene nale uphethwe isifo Peyronie sika. Kanjani ukwelapha isifo, ngingasho eyodwa owelapha emsebenzini, onguchwepheshe emkhakheni yayo. Lapho sizama self ungakwazi senze isimo sishube, futhi ingozi yezinkinga. Ngakho-ke, lapho izimpawu zokuqala zesifo Kunconywa ukuba uxhumane nodokotela wakho ngokushesha.
Amatshe atholakala enyongweni akhiwa yini? amatshe atholakala enyongweni kanjani ngokushesha kwamiswa
Inqubomgomo basekhaya nabamazwe angaphandle Borisa Godunova kafushane
"Pechora" (intambo): incazelo, ukubuyekezwa, amanani
Kanjani ukwakha phansi ekhazimulayo ngezandla